I-Hebei Besttone Fashion Co., Ltd.eyasekwa ngo-2005, yinkampani yorhwebo yobungcali ebanzi ehlanganisa uphando kunye nophuhliso lobugcisa, DB ingubo, textile ingubo, isambatho kunye nempahla kwangaphandle lemveliso. Inkampani inoyilo olugqwesileyo kunye neqela lokuvelisa ukuqinisekisa ukudityaniswa okusondeleyo kuphando ukuya kwimveliso.
I-Besttone ibizinikele kwicandelo le-appreal kangangeminyaka engama-20, kwaye iseke inkqubo efanelekileyo yokubonelela, idibanisa kwaye inikezela abathengi abaninzi ababalaseleyo. Iimveliso zithunyelwa eYurophu / eAsia naseAfrika nakwamanye amazwe. Ikhule njengeshishini lokuthumela kwelinye ilizwe elinobungcali, elinobuchule kunye elijolise kwinkonzo, eliwine indumiso ngamxhelo mnye kubathengi abaninzi abaziwayo eYurophu naseMelika, kwaye yaphumelela inkolelo elungileyo kwishishini.
Emva kokungqubana kwamandla kunye netekhnoloji, umzi-mveliso weBesttone wakhiwa wafakwa kwimveliso ngo-2017. Lo mzi-mveliso ubekwe kwidolophu yomphathi wethu jikelele ukuze kube lula ukuyilawula. Inabasebenzi abangaphezu kwama-500, kunye neeseti ezili-15 zemigca yemveliso ephambili. Bonke oomatshini kwimigca yemveliso bathengwa kwinkampani enkulu yezixhobo, kwaye badlulile kukhuseleko lwamanye amazwe kunye neemvavanyo ezisemgangathweni. Kananjalo ineendibano zocweyo ezizimeleyo, ezinje ngokwenza iipateni, ukusika, ukuthunga, ukugqiba, ukukhangela umgangatho kunye nokupakisha, ukuze umzi mveliso uvelise ezizimeleyo kwaye ulawule ezizimeleyo. Wonke umsebenzi kumgca wokuvelisa uqeqeshwa zizakhono zemveliso kunye nokhuseleko ukufezekisa injongo engqingqwa yeenkonzo zemveliso. Zonke ezi zinokuqinisekisa kakhulu iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nexesha lokuhambisa ngokukhawuleza. Umzi mveliso usebenzisa inkqubo yolawulo lwentsebenzo. Imveliso yexesha elifanayo ngokungqongqo kunye nokudibanisa ulungiselelo ekuthengeni, kwimveliso ukuya ekupakisheni nasekuthuthweni yiFonetone mveliso uqobo. Kwakhona umzi-mveliso useke eyona nkqubo yenkonzo ibalaseleyo kumthengisi nakwezothutho.
Emva kweminyaka yokuqokelelwa kwamandla, ekudibaniseni izibonelelo ezininzi ezikumgangatho ophezulu, ngoku, iBesttone yangena ngokusesikweni kumhlaba omtsha-imveliso yangaphandle yokukhusela. Imveliso ibandakanya iimpahla zangaphandle iimpahla zokufudumeza kunye nezinye iinkcukacha zangaphandle, ezinje ngeiglavu, isikhafu, idolo, idolo lesandla, ibhanti yengqiniba, imaski, imaski yobuso, oobhaka, iingxowa zasesinqeni, iingxowa zengalo, umnqwazi ofudumeleyo, ibhegi yokulala, intamo yomqala njalo njalo Zonke iintlobo zemveliso yokhuselo yangaphandle. Zonke iimveliso zinokuhlangabezana nesiqinisekiso semigangatho yamanye amazwe
Ngokusekwe kwiimveliso ezikumgangatho ophezulu kwaye zikhokelwa ziimfuno zabaxumi, iBesttone iye yashishinela imveliso eyahlukeneyo edibanisa iimpahla / iimpahla / iimveliso zangaphandle. "Umgangatho ongqongqo njengesiseko, ibango lomthengi njengesikhokelo, inkonzo ekumgangatho ophezulu njengenjongo" Esi sisibhengezo sethu esingaguquguqukiyo senkampani yeBesttone kwaye bonke abasebenzi beBesttone mabalandele. Ndiyakholelwa ukuba kwixa elizayo, u-Hebei Besttone fashion Co, Ltd. uya kuba yinkwenkwezi eqaqambileyo elizweni.